The Escapists 2: Pocket Breakout 1.4.576665 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.4.576665 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ The Escapists 2: Pocket Breakout
The Escapists 2: Pocket Breakout ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Cougar Creek အဘိဓါန်ရထားလမ်းအတှကျအဆငျသငျ့ရယူပါ: အခမဲ့ထောင်မှ Update ကို!
အဆိုပါ Escapists2ထောင်ကနေလွတ်၏-ဒါ-ရိုးရှင်းသောမဟုတ်စိန်ခေါ်မှုထုတ်ဝေကြောင်း Hilary စိတ်လှုပ်ရှားစရာ, sandbox 'မဟာဗျူဟာအတှေ့အကွုံဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူသင့်ကိုယ်ပိုင် con Create နှင့် The Escapists2သို့ခုန်: Pocket Breakout ။
မျိုးစုံကြမ်းပြင်, ခေါင်မိုး, အပေါက်တွေနဲ့မြေအောက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းနှင့်အတူ, သေးအကြီးမားဆုံးအကျဉ်းထောင် Explore ။ သငျသညျထောင်ထဲမှာအလုပ်အကိုင်များလုပ်နေတာနှင့်တင်းကျပ်သောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုအောက်ပါ, လိပ်ခေါ်ဆိုခတက်ရောက်ခြင်း, အကျဉ်းထောင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအားဖြင့်အသက်ရှင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်; လူအပေါင်းတို့သည်အနေဖြင့်လျှို့ဝှက်စွာလွတ်လပ်မှုကိုအဘို့သင့်လေလံအင်ဂျင်နီယာ!
ဒေသခံ multiplayer နှင့်အတူအဆုံးစွန်လွတ်မြောက်ဖန်တီးရန်သင့်မိတ်ဆွေအထိ3နှင့်အတူစည်းလုံး။ အတူတကွအလုပ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည် ပို. ပင်ပီပီနှင့်ရဲအစီအစဉ်များကိုဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မည်!
2 Escapists Download: Pocket Breakout သည်ယနေ့ ... ဒါဟာမရာဇဝတ်မှုပါလိမ့်မယ်!
အားလုံး features အသစ်နှင့်အတူ * ကိုစှဲထောင်ထဲမှာခြင်း simulation ဂိမ်း
Indie sandbox 'ရူးနှင့်ပြည့်စုံ *7စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသောအကျဉ်းထောင်, Center ကအခွင့်အရေးနဲ့တူဒါမှမဟုတ်ပိုပြီးခိုင်မာစေရာဇဝတ်ကောင်အမွီးကခလောကျသံပွုတတျသောမွှေဆိုး Springs အဘို့အနိမ့်ဆုံးလုံခြုံရေးထောင်တွေမှာရှိတဲ့ကနေလွတ်!
* ယ်ယူရန်, ကုန်ဖလှယ်ရေးနှင့်သင့်ထွက်ပေါက်အကူအညီပေါင်းစပ်သောင်မတင်များစွာဖန်တီးရန်များစွာလိုအပ်နေသောပစ္စည်းများရယူရန်သင့်လမ်းရိုက်နှက်!
* သေချာသင်အခန်းကဏ္ဍခေါ်ဆိုခတက်ရောက်ရန်ဖြစ်စေလျက်, ထောင်ထဲမှာဘဝလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နှင့်ပြည့်စုံသည်, ထွက်တွေဆီကနေရန်အတွက် Blend သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အဘို့အတွက်နာရီနှင့်ရေဒါအောက်မှာရှိနေဆဲ!
* သင်ကအချိန်ရတယ်, ဒါကြောင့်လည်းသုံးဖြုန်းင့်! သငျသညျ breakout ဖို့ဦးနှောက်နဲ့ brawn ပေးရန်အားကစားရုံမှာစာကြည့်တိုက်နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာသင့်ရဲ့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်! သို့မဟုတ်သင်ရုံဝါသနာအရလေ့လာသင်ယူတစ်ခုသို့မဟုတ်တီးဝိုင်း join နိုင် ...
* လိမ္မာသည် ဖြစ်. အတွက်ယာဉ်တင်! scheme, ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့အောင်မြင်သငျသညျထောင်ထဲမှာဘဝကတဆင့်ဖြတ်သန်းအဖြစ်, မိတ်ဖောက်လုပ်, အစောင့် '' မျက်စိကျော်သိုးမွှေးဆွဲ, ဒါမှမဟုတ်အထဲကညာဘက်သင်သည်သင်၏ထွက်ပေါက်ကြံစည်ခြင်းနှင့် execute ရန်သင့်ကျက်သရေ, ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်တစ်သိန်းကိုအသုံးပြုဖို့အဖြစ်, သူတို့ကိုလာဘ်ထိုး!
* အဆိုပါ Escapists2ဖြိုဖျက်တစ် breakout ပျတစ်လှည်တာဝန်ပါ! အဆိုပါပြုပြင်မွမ်းမံတိုက်ခိုက်ရေးစနစ်ဖြင့်, သင်တိုက်ပိတ်ခံရ၏ချည်နှောင်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်ဖွင့်သော့ခတ်ပစ်မှတ်ပေါ်မှာသော့ခတ်နေတုန်းတိုက်ခိုက်မှု chaining, သင့်ဆဲလ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်တိုက်ခိုက်မှုများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းပါလိမ့်မယ်!
The Escapists 2: Pocket Breakout အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
The Escapists 2: Pocket Breakout အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
The Escapists 2: Pocket Breakout အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
juliplayshop စတိုး616.43k
The Escapists 2: Pocket Breakout ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း The Escapists 2: Pocket Breakout အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.4.576665
ထုတ်လုပ်သူ Team 17 Digital Limited
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.team17.com/privacy-policy/
လက်မှတ် SHA1: 8F:4C:AF:99:39:C0:B2:1A:72:AF:AC:8F:2D:2C:EE:98:30:90:F2:0C
ထုတ်လုပ်သူ (CN): codeglue
အဖွဲ့အစည်း (O): Team 17 Digital ltd.
နယ်မြေ (L): Rotterdam
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Zuid Holland
The Escapists 2: Pocket Breakout APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ